နယူးဟောင်း #GWR တွေ့ဆုံ #greatwesternrailway #newtrains #hst
အားဖြင့်မျှဝေတစ်ဦးက post ကို Nigel ကို C Williamson (@ nigelw68) အပေါ် ဇန်နဝါရီ 22, 2018 တွင် 3:24နံနက် PST
ဆူညံသံညစ်ညမ်းမှုလူသားများနှင့်တိရိစ္ဆာန်များနှစ်ဦးစလုံးအပေါ်ဆူညံသံ၏ဆိုးရွားသောသက်ရောက်မှုပင်ဖြစ်သည်. ဒါဟာဆငျးရဲသားတစ်ဦးကိုတိုက်ရိုက်ရလဒ်ပင်ဖြစ်သည် မြို့ပြစီမံကိန်းရေးဆွဲရေး. ရှေးခေတ်ရောမမြို့မှဆူညံသံညစ်ညမ်းမှုနေ့စွဲနောက်ကျောကနေပြဿနာများ! ယနေ့တွင်, ကားများအနေဖြင့်ဆူညံသံညစ်ညမ်းမှုကြောင့်လူရဲ့စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာပြည်နယ်မှပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုဖြစ်ပေါ်စေနိုင်သည်. ရောဂါလက္ခဏာများသွေးတိုးရောဂါပါဝင်သည်, High-စိတ်ဖိစီးမှုအဆင့်ဆင့်, tinnitus, အိပ်စက်ခြင်းနှောင့်အယှက်, နှင့်အခြားအန္တရာယ်ရှိသောဆိုးကျိုးများ.
အကြားကွာခြားချက်ရှိပါသည် ဒီဇယ် ရထားများနှင့် လျှပ်စစ် ရထား. လျှပ်စစ်ရထား ထုတ်လွှတ် 20-35% တစ်ဒီဇယ်မီးရထားထက်လျော့နည်းကာဗွန်. တစ်ဦးကရထားပြန်လည်ပြည့်ဖြိုးမြဲစွမ်းအင်နှင့်ကမ်းလှမ်းမှုအားဖြင့် powered ဖြစ်ကြောင်းအထူးသဖြင့်လျှပ်စစ်ရထားပတ်ဝန်းကျင်နဲ့သဟဇာတဖြစ်ပါတယ် Carbon-အခမဲ့ခရီး. ကနေထုတ်လွှတ်မှု ဥရောပ၌ရထား တစ်ဦးကိုထပ်မံအားဖြင့်လျှော့ချပါလိမ့်မယ် 50% အားဖြင့် 2030. ရထားများအတွက်အကောင့်ကတည်းကဒါတွေကကိန်းဂဏန်းများအကြီးအများမှာ 8.5% အားလုံးခရီးသွားလာလှုပ်ရှားမှု.
#ပုံဥပမာ #environment #carpolution
အားဖြင့်မျှဝေတစ်ဦးက post ကို Dave ဝီ (@davewheelerstudio) အပေါ် ဇွန် 23, 2016 တွင် 3:18ညနေ PDT ရန်ကုန်
အကျိုးစီးပွားအခြို့သောပစ္စည်းများကိုသည့်အခါ လေယာဉ်မှရထားနှိုင်းယှဉ် လေယာဉ် takeoff နှင့်ဆင်းသက်နှစ်မျိုးစလုံးအတွက်လောင်စာအနေနဲ့မယုံကြည်နိုင်လောက်အောင်ငွေပမာဏကိုသုံးစွဲဖို့မလိုအပ်ကြောင်း. လည်း, လူတွေလေယာဉ်ဖြင့်ခရီးသွားလာသည့်အခါ, သူတို့ကားဖြင့်လေဆိပ်ရလေ့. ဒါကသူတို့ရဲ့ခရီးများအတွက် CO2 ထုတ်လွှတ်မှုမှဖြည့်စွက်. ဒါကတစ်ခုယူပြီးစေသည် အချင်းချင်းရထား ပတ်ဝန်းကျင်တစ်ခုမျှမ-brainer.
အချို့မကြာသေးမီကဖြစ်ပေါ်တိုးတက်မှုရှိခဲ့သည်, အထူးသဖြင့်လူတို့အဘို့ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းအတွက်ခရီးသွားလာ ၎င်းတို့၏ခရီးစဉ်များ၏ကာဗွန်သက်ရောက်မှု၏ခရီးသွားအေးဂျင့်များအားဖြင့်အကြောင်းကြားသူ. လည်း, ဘေးဖယ်ပတ်ဝန်းကျင်ကနေ, ကားဖြင့်မြို့စင်တာများရောက်ရှိဖို့အလွန်ခက်ခဲသည်, သော်လည်း, သင်တစ်ဦးရထားပေါ်တွင်လျှင်, သင်မြို့ပြစင်တာများမှတိုက်ရိုက်အသုံးပြုခွင့်ရှိသည်. ဤ, ပိုပြီးမကြာခဏမထက်, ထို့အပြင်အခြားနည်းလမ်းထက်ရထားသွားလာအများကြီးပိုမြန်ဆိုလိုတယ်.
နိဂုံးချုပ်အားဖြင့်, ရထားပတ်ဝန်းကျင်နဲ့သဟဇာတနှင့်ခရီးသွားလာခြင်းနှင့်လည်းစီးပွားရေးနှင့်ပျော်မွေ့နှစ်ဦးစလုံးအတှကျအခရီးသွားလာလူများအတွက်အဆင်ပြေများကိုအများဆုံးပတ်ဝန်းကျင်-ဖော်ရွေနည်းလမ်းဖြစ်ပါသည်. လမ်းအပေါ်ကားများအတွက်အဆိုပါတိုးပိတ်ဆို့မှုကိုနှင့်လေထုညစ်ညမ်းမှုစီးပွါးအပေါ်ဖြစ်ကြပြီးရထားပတ်ဝန်းကျင်ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ဖို့သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးအဖြေဖြစ်ကြောင်းဆိုလိုတယ်.
သင်သည်သင်၏ site ကိုပေါ်ကိုကျွန်တော်တို့ရဲ့ဘလော့ဂ်ပို့စ် embed လုပ်ဖို့ချင်ပါနဲ့, ထို့နောက်ဒီနေရာကိုနှိပ်ပါ: https://embed.ly/code?url=https://www.saveatrain.com/blog/why-choosing-to-travel-by-train-is-environmentally-friendly/ - (အဆိုပါ Embed Code ကိုကြည့်ဖို့အောက်ကိုဆင်း)